Dhageyso: Faah-faahin cusub oo ku saabsan qaraxii ka dhacay Muqdisho & Taliska Ciidanka Booliska oo..
Muqdisho (Horumar Online) – Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay labo Qarax oo Sabtidii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho,kuwaas oo ay ciidanka amnigu ku raad joogeen.
S/guuto Bashiir Cabdi Maxamed (Ameeriko), taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in labada Qarax ay ka kala dhaceen agagaarka Taaladda Sayidka iyo meel ku dhow Hotel Afriik gaar ahaan Barta-Kontaroolka ee wadada aadda Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
“Maanta waxaa Xamar ka dhacay labo Qarax oo is xig-xigay,kan koowaad wuxuu ka dhacay taalada sayidka agagaarkeeda,waxaa ku dhintay sagaal qof,waxaa ku dhaawacmay 25-Qof,Qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay agagaarka Hotel Afrik gaar ahaan meel ku dhow barta-Kontaroolka ee wadada aada Airport-ka,waxaa ku dhintay dhagarqabihii waday gaariga halka uu ku dhaawacmay mid kii la socday oo ciidanka Booliska ay hadda gacanta ku hayaan,” ayuu yiri Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Wuxuu kaloo sheegay, taliyuhu in labada gaari ee Qarxay ay ku raad joogeen ciidanka, islamarkaana iyagoo eryanaya ay Qarxeen, waxaana gaariga Qaraxa Ciidanka ku soo wargeliyay qof shacab ah.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Bashiir Cabdi Maxamed Ameeiko ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan ciidanka amniga lana wadaagaan xogaha horseedi kara in gacanta lagu soo dhigo dhagarqabayaasha caadeystay daadinta dhiiga shacabka masaakiinta ah ee Soomaaliyeed.
Halkan ka dhageyso Codka Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Tags: #Bashiir Ameeriko #Muqdisho #Qarax #Taliska Ciidanka Booliska
Previous Post UPDATE: In ka badan 10 Askari Kenyaan ah oo qarax lagu Dilay
Next Post Maxay ka tiri DF Somaliya Dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo?